Honda Fit 2010 (#710702) ကို Hlaing ၿမိဳ့နယ္တြင္ေရာင္းရန္ရွိ | CarsDB
849 total views, 17 today
Lot Number: #710702
^Honda Fit Ge 6, 2010 model,
Gf grade. 1K/ Ygn လိုင်စင်(2021)
km ၁ သိန်း ၉ ထောင်++(အမှန်) မှန်မဲ၊ မီး​​ခြောက်၊ တာယာ 80% ကောင်း၊ ​​အော် Honda Alloy wheel.
အင်ဂျင်​ ဆွဲ/ရုံးကောင်း၊ အတိုက်အခိုက်ကင်း၊ A/c ​အေးစိမ့်၊ အတွင်းခန်းသန့်၊
အိမ်စီးကား သန့်သန့်​ ၁စီး​ ရောင်းမည်၊
186 Lkh (​​အနည်းငယ် ညှိနှိုင်း​စျေး)
MICT Park (Mon_Fri)/ N.Dgn
CarsDB တွင် ( ဦး/ဒေါ် ) Ko Min Din မှ ကြော်ငြာတင်ထားသော Honda Fit 2010 နှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းလိုသည်ဟု ပြောပါရန်။